Zuva: Chivabvu 17, 2020
Kuwanda kwemhosva dzehutachiona muBrazil zvakapfuura Spain neSpain, zvichiita kuti ive nyika yechina munyika nehuwandu hwepamusoro hwezviitiko. Munyika umo huwandu hwenyaya dzakasimbiswa dzakakwira kusvika pamakumi maviri nematatu nemazana mana nemakumi maviri nenomwe [More ...]
Chivharo chekupedzisira cheshongwe tsvuku uye chena chaisanganisira makumi matatu nemaviri e1915 Çanakkale Bridge, iyo yakanga ichivakwa, yakatsiviwa nemhemberero yakapindwa neMutungamiriri Recep Tayyip Erdoğan nemusangano wevhidhiyo. Vachitaura pamhemberero yeKaraismailoğlu nhoroondo muTurkey yezvivakwa zvekufambisa [More ...]
Musi wa19 Chivabvu Kurangarira kweAtatürk, Vechidiki neMitambo Zuva, yaive chiitiko chegumi nemanomwe Gazi Mustafa Kemal Atatürk achipisa torch yeruponeso muSamsun nekumanikidza kuSamsun musi wa 1919 Chivabvu101, kuungana mumatunhu mashanu epakati peAntalya. [More ...]
Kupfuura kuSamsun Mugwagwa wekuchengeteka kweVadzidzi
Ankara Metropolitan Municipality yakurumidzira kuvaka kwekufamba kwevanofamba netsoka panzvimbo dzinowanikwa nemigwagwa kune kwakaomarara uye kuchengetedzwa kwevagari kune njodzi. Metropolitan, iyo isingarambe zvinodiwa nevadzidzi, kunyanya kumatunhu ane mayunivhesiti akakora [More ...]
7/24 Asphalt Shift Inopfuurira muBursa
Metropolitan Municipality, iyo yakatora danho mukati mechikamu chekusvikira yakaiswa pasi pematanho ekoronavirus uye yaunza hupenyu migwagwa yeBursa yakapfeka nekuunza anosvika zviuru makumi manomwe ematani easphalt pasi, Atatürk [More ...]
Mugwagwa unobatanidza Istanbul neKocaeli wave pedyo nemugumo
Kocaeli Metropolitan Municipality inoenderera mberi nekuita zvirongwa zvikuru zvekupa nekufambisa kwakanaka uye kwakafambarara kune zvakawanda nzvimbo zveguta. Migwagwa mitsva yakavakwa inomhanyisa kuyerera kwemafambiro, seyimwe nzira yekufambisa kune vagari. [More ...]
PresidentBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu akaenderera mberi nekuongorora masevhisi epasirese panguva yekurerwa yaakapedza ari muguta rese reguta. İmamoğlu, uyo akagadzira bvunzo panzvimbo ino muEküpsultan iyo inotakura "matope" eguruva reGoridhe, akati, "Maitiro aya [More ...]
Izmir Metropolitan Meya Tunç Soyer akaongorora iyo 'Natural Route' chirongwa pane saiti, inofukidza nzvimbo yekumaodzanyemba kweGediz Delta. Mutungamiri Soyer anogamuchira makumi eshiri, kunyanya flamingo, uye zviuru zvemarudzi. [More ...]
Iyo "mota yemukati" chirongwa, chakaunzwa kuchirongwa neshambadziro huru yakaitwa neMutungamiri Erdoğan, iri pachirongwa zvakare mushure mekusimuka mumazuva edenda. Panguva ino, chirongwa ichi chakati nyika, iyo inonzi ichavakwa, yakaendeswa kuWealth Fund. [More ...]
Ejder Yalçın 4 × 4 Armored Combat Vehicle Nurol Makina inoshanda zvido zvemauto mauto nemauto ekuchengetedza mumarudzi ese ematunhu uye mamiriro epasi, kusanganisira yekugara nenzvimbo dzekumaruwa. [More ...]
Virtual Trade Kugovaniswa Akawana Kumhanya
Iko kushanya kwevatumwa kushanya kwakarongedzwa neBazi rezvekutengeserana nevanotengesa kunze kwenyika vanopfuurira kuitiswa munzvimbo yakatarwa pasina kudzikisira pasi pemamiriro erudzi rutsva rwecoronavirus (Kovid-19) denda. Famba pasi peKovid-19 zviyero [More ...]
Projecteşme Project Yekuongorora Musangano Wakagadziriswa
Gurukota rezvetsika uye Tourism, Mehmet Nuri Ersoy akataura kuti vanovavarira kuita dunhu iri seyenzaniso muenzaniso wekushanya rudzi neiyo Çeşme Project. Gurukota Mehmet Nuri Ersoy, mukati meganho reAegean Tourism Plan, [More ...]
Gurukota rezvetsika uye Tourism, Mehmet Nuri Ersoy, "Kana pasina chakashata, ndinovimba kushanya kuchatanga neyekushanya kwevanoshanya mukati saMay 28." akadaro. Minister Ersoy, mhando nyowani muTVV inorarama pachena muBodrum mudunhu reMuğla [More ...]
YeShamwari Shamwari Bhuku Rondedzero ye 0-6 Makore Vakuru Vana Vave Vakabudiswa
SeS Ministry of Family, Labor and Social Services, mabhuku makumi mana neshanu ane hushamwari ayo akatorwa seanokodzera vana vane makore 0-6 akaburitswa webhusaiti yeBazi. Zera- [More ...]
Panguva iyo mabhuku aBarry S. Turner naMichael Radford, avo vaionekwa sevakatendeka ruzivo rwe nhoroondo yenhoroondo yekufambisa kwezvitima muCyprus, iyo yakasiya chiratidzo chavo panguva yeBritain yeKoloni, yakashandiswawo, uye ruzivo kubva kune vakwegura vanogara mumazuva iwayo. [More ...]
Ekrem İmamoğlu akaberekwa muna 1970 muTrabzon. Mushure mekupedza kudzidza kubva kuTrabzon High Chikoro, akapedza kudzidza kubva kuDhipatimendi reBusiness Administration muIstanbul University, uye akawana dhigirii rake reMasters muHuman Resources ne Management kuIstanbul University. Kuvaka muna 1992 [More ...]
TCDD Tasimacilik yakazivisa kuti ichadzosera ndege dzeMhando yepamusoro (YHT), idzo dzakamiswa nekuda kwedenda re coronavirus, mushure memutambo (pasati papera 1 June). Maererano oUmambo Olcay Aydilek kubva Habertürk, ane yaizotangira coronavirus muna March. [More ...]
Republic of Turkey General Directorate of State Railways Administration Assistant General Manager uye Bhodhi nhengo vakatendeukira kuKara uye kuyemurwa kweMutemo Nhamba 233, Chinyorwa 8 chePurezidhendi Nyika kutadza kuenda kuNombolo 3 ne2. [More ...]
Pachave neinostalgia tram inoshanda mu İzmir uye Istanbul Taksim. Metropolitan's Nostalgic Tram Project iri kuuya kuhupenyu. Iyo Nostalgic Tram ichavakirwa kupi? Zvichapfuurepi? Nostalgic tram, icho chiratidzo cheTaksim Istiklal Avenue muIstanbul, muIzmir [More ...]
Iyo ndiyo inonyanya kushandiswa mutsara weAdana Mersin State Railways. Nguva yekufamba Inotora inosvika makumi mana maminitsi. Adana Mersin Chitima Chekutanga anotanga na45 mangwanani, zvisinei nezhizha uye mwaka wechando nguva 6: 00 [More ...]
Recep Tayyip Erdoğan, uyo anobva kuRize, akazvarwa muna Kukadzi 26, 1954 muIstanbul. Akapedza kudzidza paKasımpaşa Piyale Primary School muna 1965 uye kubva kuIstanbul Imam Hatip High School muna 1973. Nekupa iyo bvunzo yemakosi akasiyana, Eyüp [More ...]
Panama Railway payakapedzwa muna 1855, njanji yakabatanidza makungwa eAtlantic nePacific kokutanga. 80 km njanji, vafambi vanofamba negungwa kuEast uye West mawodzanyemba eUnited States [More ...]
Nhasi munhoroondo: 17 1972 991 XNUMX mamiriyoni ezvitima
Nhasi munhoroondo 17 1972 991 Railways ine rekodhi rakarasika neXNUMX mamiriyoni TL.